Lalao Misaron-tava tafika: Zombie Survival aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Misaron-tava tafika: Zombie Survival an-tserasera
Lalao Online Action Games Games ho an'ny ankizilahy Shooting Games Zombies Action Mitifitra ho an'ny ankizilahy Shooting On care Html5 Webgl
Near iray amin'ireo tanàna any Amerika nianjera fiaramanidina nitondra ny vaovao fampandrosoana ny fitaovam-piadiana simika. Otrik'aretina mahafaty novakiny maimaim-poana, ary efa ho ny mponina rehetra tao an-tanàna no maty ary niova ho zombies. Anao tao amin'ny lalao misaron-tava Hery: Zombie Survival ho toy ny ampahany amin'ny hery manokana dia hatsipy ao an-tanàna, mba hanadiovana azy io avy amin'ny karazana biby goavam-be. Tsy maintsy mandeha midina eny an-dalana ho any amin'ny napetraka mba hijery any an-trano, ary hamono ny zombies tojo ianao. Jereo tsara amin'ny lafiny roa, dia afaka mahita zavatra isan-karazany sy ny fitaovam-piadiana izay hanampy anao amin'ny traikefa nahafinaritra. Mandehana dia afaka milalao irery na miaraka amin'ny hafa ao amin'ny ekipa mpilalao, izay nilalao tao ihany koa ity lalao.